Dhisidda bogga quruxda badan ee WordPress ma aha sayniska raajada.
Sida oo kale sida milkiile-meher kasta uu leeyahay goolal gaar ah, Website-yada WordPress waxay leeyihiin qaabab aan dhammeystirneyn oo suurtogal ah. Người dùng Iyo sida ah, ujeedada ugu muhiimsan waa in la aqoonsado isku dheelitirka ugu wanaagsan ee plugin, content, iyo qaababka qaabeynta for waayo-aragnimo dhab ah.
Mashruucaan, waxaan eegeynaa hababka ugu fiican ee lagu soo saaro boostadaada iyo sawirrada sawirrada.
1 Habka # 1: Isticmaalida FooGallery
1.1 Mẫu Doorashada
1.2 Galitaanka Galxannada Qoraalada
1.3 Hagaajinta FooGallery
2 Habka # 2: Abuuritaanka Galxannada aan lahayn Plugins
3 Habka # 3: Plugin Qalabka kale ee
3.1 Bandhigga Bandhigga ee CNTT rất lớn
3.2 Nguồn cấp dữ liệu Instagram WD
Habka # 1: Isticmaalida FooGallery
Haddii ay jiraan hal shay oo ay beesha WordPress u mahadcelineyso, waa xayeysiin lacag la’aan ah taas oo fududeyneysa in lagu daro sifooyinka waxtar leh ee goobtooda.
FooGallery waa mid ka mid ah plugin ugu caansan ee aad isticmaali kartid si aad u sameyso goobaha sawirada ku yaal. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad abuurto qurux badan, jawaabo mobile ah, iyo qolal dib-u-riix ah oo aan ku qorin xariiq halbeeg ah.
Habka ugu dhakhsaha badan ee lagu rakibo FooGallery waa mashiinka WordPress. Trình cắm thẻ> Ku dar Ku cusub, ku qor "FooGallery", oo riix badhanka rakibida.
Ka dib markii la rakibo iyo Firfircooni, waxaad bilaabi kartaa sameynta galabta koowaad adiga oo gujinaya FooGallery> Thêm thư viện.
Geli cinwaan kaa caawin doona inaad ogaatid waxa sawirku yahay sáp walba. Tani ma muuqan doonto Dadka isticmaala, sidaas darteed waxaad xor u tahay inaad isticmaasho cinwaanka aad rabto.
Si aad ugu darto sawirada galabtaada, riix "Thêm phương tiện truyền thông" hoosteeda "Alaabta Galmada".
Tani waa inay keentaa giao diện la yaqaan oo aad ka dooran kartaa sawir maktabaddaada warbaahintaada ah, ama waxaad ku soo diri kartaa mid cusub adigoo gujinaya Dukumiintiyada Faylka.
Marka lagu daro sawirrada galabtaada, fiiro gaar ah ku qor faylka iyo cinwaanka adoo dooran kara inaad muujisid labadaba marka ay isticmaalaan Dadka isticmaala.
Marka aad buuxisay dhammaan sawirada aad u baahan tahay, horay u sii soco oo hagaajinta goobaha markaad aragto taam. Ku bilow inaad mẫu cửa cho phòng trưng bày aad.
Mẫu ayaa si weyn u qeexaysa sida galabtaada u muuqato.
Tusaale ahaan, shaxanka sawirka sawir-celinta ayaa muujinaya dhammaan sawirada sida shabakad si toos ah u dhigtay iyada oo ku saleysan cabbirka baaxadda:
Dhanka kale, mẫu Hình ảnh Muuqaalka bandhigayaa hal hình marka la siiyo Dadka isticmaala badhanka navigation:
Iska fiirso trong inta kale ee goobaha la heli karo ay ku xiran yihiin mẫu. Qaar ka mid ah goobaha aad ka heli karto waa isku-xidhka galbeedka, cabbirka hình thu nhỏ, saameynta jajabka, kala-wareegidda shabakada, kumbuyuutarka, iyo wixii.
Xor ayaad u diyaarsan tahay inaad la ciyaarto goobahaas ilaa aad ka gaarto muuqaalka aad rabto. Istaraatijiyad fiya ayaa ah trong albaabbadu u furan yihiin hal tab iyo mid kale oo bog ah.
Tani waxay keeneysaa talaabada soo socota – ku darida sawirrada sawirada.
Galitaanka Galxannada Qoraalada
Waxaa jira asal ahaan laba siyaabood oo lagu daro sawirrada sawirrada mawduucaaga: iyada oo la adeegsanayo gaaban iyo iyada oo loo marayo tifaftiraha erayga WordPress.
Si aad u hesho khadka gaaban ee loogu Talagalay galaan gaar ah, tag FooGallery> Sawirada laga bilaabo bảng điều khiển. Guji shaxda gaaban si aad si toos ah ugu daabacdo koontadaada.
Marka xigta, si fudud u dhaji khadka gaaban ee ku jira qaybaha mawduuca ee boostada ama bogga. Haddii ay ka shaqeyso, waa inaad aragto meel bannaan oo galabta leh oo leh shaxda hoosta ku taal.
Ha Welwelin – booska ma matalayo waxa sawirku u egyahay marka bogga dhabta ah la rarto.
Kala bedelka kale waa trong lagu dhejiyo galbiyada si toos ah boosto ama bog. Bảng điều khiển Laga soo bilaabo WordPress, fur bogga ama boostada aad rabto in aad isticmaasho oo guji Thêm nút FooGallery ee tafaftiraha.
Tani waxay keeni doontaa "Dooro Galbeed" meesha aad ka heli karto dhammaan galbadaha aad heli kartid. Sáp kale oo aad abuuri kartaa galmo cusub oo laga soo xoqo halkan.
Si aad udheesho galabta, guji sawirka hình thu nhỏ kadibna riix badhanka galinta Galmada.
Haddii aadan ka heli karin gallery aad rabto in aad isticmaasho, waxaa laga yaabaa inaad ka abuuray oo kaliya ka mid ah tab ah. Kiiskee, kaliya riix batoonka Tải lại dib si aad u cusbooneysiiso daaqada.
Ballaarinta waa mid ka mid ah faa’iidooyinka ugu weyn ee FooGallery. Markaad tag vào FooGallery> Cài đặt, waxaad bedeli kartaa dhowr qaybood oo ku saabsan sida loo isticmaalo plugin.
Tusaale ahaan, muraayadaha Sawirada, waxaad hagaajin kartaa tayada sawirada albaabada illaa ugu badnaan 100.
Ugu dambeyntii, FooGallery waxay taageertaa tiro fara badan oo khafiif ah oo khafiifiya oo ku daraya shaqeyn. Waxaad xiri kartaa dukaanka kordhinta adoo tagaya FooGallery> Tiện ích mở rộng.
Habka # 2: Abuuritaanka Galxannada aan lahayn Plugins
Haddii aadan kufarin fikradda ah inaad u isticmaashid qalab wax walba, ka dibna waxaad tixgelin kartaa isticmaalka ku dhisan dhisme WordPress ah halkii.
Si aad u sameysid galabyada aan boostada lahayn adigoon raacin, waxaad gashaa tifaftiraha erayga WordPress kadibna riix Thêm Media.
Ka song, ô cửa "Tạo thư viện" oo Dooro sawirrada aad rabto inaad isticmaasho.
Marka aad leedahay dhamaan sawirada la doortay, guji Tạo một nút badhanka cusub.
Tani waxay kuu keeni doontaa Dariishadda Dariishada Furaha meesha aad ku tilmaami karto amarka sawirada, tirada salka aad rabto inaad isticmaasho, iyo cabbirka galaaska.
Ha iloobin inaad qorto talaabo ku habboon sawir kasta si ay u siiso Dadka waxoogaa macno ah. Waxa kale oo aad sáp ka beddeli kartaa dabeecadaha isku-xirnaanta sawir kasta.
Tân u dhig "không ai" haddii aadan rabin ở galabtaada ay noqoto mid dhexdhexaadineysa.
Habka # 3: Plugin Qalabka kale ee
Waxaan hadda ku soo aragnay laba ka mid ah doorashooyinka ugu caansan ee lagu daro galinka dambe ee boosteejooyinka gửi ee WordPress.
Si aad u hesho raaxo dheeraad ah, halkan waxaa ah dhowr habab kale oo loogu Talagalay FooGallery waxaad ka fiirsan kartaa:
Bandhigga Bandhigga ee CNTT rất lớn
Địa điểm: www.imagely.com/nextgen-gallery/; Thời gian: Bilaash / $ 69
Marka la eego qalabyada Firfircoon, NextGEN Galbeedku waa kan ugu sarreeya ee ka sarreeya isticmaalayaasha 1 triệu. Sababta kaliya ee sababta FooGallery loogu diyaariyay booskan waa qiimaha sarreeya. Waxa kale oo ay leedahay qaybo dheeraad ah oo lagu sharxi karo kuwaas oo noqon kara wax yar oo ku wareeraya Dadka cusub. Si kastaba ha ahaatee, waa plugin adag oo kaa caawin karta inaad abuurto qurxiyo qurux badan iyo jawaabo.
Nguồn cấp dữ liệu Instagram WD
6 načinov Suuq Ganacsigu Waa Sida Loo Toos na spletu
6 способів Suuq Ganacsigu Waa Sida Loo Toos Online